Baolina lavalava - "Top 6" :: Voahosotra ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina ny FT Manjakaray • AoRaha
Baolina lavalava – « Top 6 » Voahosotra ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina ny FT Manjakaray
Sambany teo amin’ny tantaran’ny baolina lavalava. Ekipa malagasy, FTManjakaray (FTM), no nandrombaka ny amboaran’ ny ranomasimbe Indianina “Top 6” omaly, teo amin’ny Kianjaben’i Mahamasina. Voan’ny mpilalaon’i Manja­karay tamin’ny isa mavesatra 47 noho 22 ny ekipan’ny Miaramila na ny Cosfa, teo amin’ny lalao famaranana.
Nahavita ny valifatiny ny ekipan’ny Dakara. Ity farany izay efa resin’ny Miaramila tamin’ny fifandonan’ny roa tonta farany nandritra ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasi­kara, taom-pilalaovana 2018.
Niady ny lalao nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Efa nitarika hatrany am-piandohan’ny fihaonana ny FTM. Fitsarana fahadisoana no nanokafan’ity farany ny isa tamin’ny alalan’ny laharany fahafolo, i Koroka teo amin’ny fahefatra ambin’ny folo minitra nilalaovana. I Mbola, laharana fahafiton’izy ireo no nanatitra ny baolina entin-tanana voalohany, izay notsa­rain’i Koroka, efatra minitra taorian’izay. Teo amin’ny fahadimy amby roapolo minitran’ny lalao no nahitan’ny Cosfa isa telo tamin’ny fitsa­rana fahadisoana nataon’i Manga. Nisaraka tamin’ny isa 18 no ho 11 ny roa tonta tamin’ny efapolo minitra voalohany.
Nahita baolina nenti-tanana avy hatrany indray i Mbola teo amin’ny fahenina ambin’ny folo minitra nanombohan’ny fizaram-potoana faharoa. Ny laharana faharoa ambin’ny folon’ny Cosfa kosa no nahita ny baolina noentin-tanana taorian’izay. Tsy tana intsony anefa ny FTM ary nifarana tamin’ny isa mavesatra 47 no ho 22 io ny fihaonan’ny roa tonta. “Mana­na mpilalao tanora betsaka izahay. Noho izany, nanantombo kokoa izay teo amin’ny vovok’aina sy hafainganam-pandeha”, araka ny voalazan’i Micka, kapitenin’ny FTM.
“Nahasorena ny fitsarana an’ilay lalao. Kivy ny mpilalao vao nahita an’izay ary tsy nety tafiditra tao anatin’ilay fihaonana intsony”, hoy kosa ny fanazavan-dRandriana­rison Rija Patrick, mpanazatra ny Cosfa.
Fahafatesana atleta-karate Nodimandry i Seinsei Michel, filohan’ny klioba Aska
Baolina kitra-Fankasitrahana Voahosotra ho mpilalao mendrika i Métanire tany Amerika
Kitra – M’Foot fokontany :: Haverina ny lalao manasa-dalana eo amin’ny 67Ha City sy ny Masp
Atletisma :: Medaly iraika ambin’ny folo azon’ny Malagasy